လူသားအားလုံးအတွက်: ကြည်နူး ရွင်လန်း
“ဘာလို့ အလုပ်က ထွက်လာတာလဲ”
“ဒါလောက်ကလေး ပြောတာနဲ့ စိတ်ဆိုးရသလား”
“ကျွန်မက စိတ်မဆိုးပါဘူး၊ သူ့မိန်းမစိတ်ဆိုးသွားတာ၊ သူ့မိန်းမရှေ့ပြောတာကိုး”
လူနာ – Doctor ကျွန်တော်မျက်လုံး ကိုက်နေတယ် ဘာလုပ်ရမလဲဟင်
ဆရာဝန် – တလောကကျွန်တော်သွားကိုက်တယ် ကိုက်တဲ့သွားကိုဆွဲနှုတ်လိုက်တာ ပျောက်သွားတာပဲ
လူနာ – ဗျာ ?
တာဇံနှင့် သူ၏တောတွင်းအပေါင်းအသင်းများဖြစ်ကြသော တိရိစ္ဆာန်များသည် ရေကူးရန်မြစ်ကမ်းနားသို့ရောက်လာကြသည်။
တာဇံသည် မြစ်ထဲမဆင်းမီ အ၀တ်အစားများချွတ်လိုက်သည်
တာဇံ ။ ။ မင်းတို့ဘာလို့ ရယ်ကြတာလဲ
တိရိစ္ဆာန်များ ။ ။ မင်းအမြီးက ရှေ့မှာပေါက်နေလို့ကွ
ဖိုးသိန်း “မိန်းမ၊ မင်းနဲ့ငါပေါင်းလာတာ အနှစ်၂၀ ကျော်နေပြီ၊ စညားကတည်းက
ငါမင်းကို မူးလာတိုင်း ရိုက်နှက်
နေတာကို မင်းဘာလို့ အခု အချိန်ထိ သည်းခံပြီးပေါင်းနေနိုင်တာလဲ”
ကျင်စိန် “အော်၊ ရှင်လည်းစိတ်တွေကို လျှော့နေပြီဆိုတော့ ပြောပြရတာပေါ့၊
ဒီလိုရှင့်၊ ရှင်ကျမကို ရိုက်နှက်ပြီး
ရှင် အိပ်သွားပြီဆိုရင် ကျွန်မ အိမ်သာတစ်ခုလုံး ကြွေခွက်ပါမကျန်
ဖိုးသိန်း “အဲဒီလိုလုပ်တာနဲ့ မင်းကစိတ်ပြေသွားရေလား”
ကျင်စိန် “ပြေတာပေါ့ရှင့်၊ ကျွန်မအိမ်သာတိုက်တာ ရှင့်သွားပွတ်တံနဲ့လေ”
ကကသ်လစ်ဘုန်းကြီးနှင့် ဂျူးဘာသာရေးတရားဟောဆရာတို့ တစ်ခန်းထဲ ထိုင်လာကြသည်။
ကက်သလစ်ဘုန်းကြီးက ဂျူးဘာသာရေးတရားဟောဆရာကို ပြောသည်။
“ကျနော့်မှာ ၀က်ပေါင်ခြောက် ပါတယ်၊ စားပါဦးလား”
“ကျနော်တို့ ဘာသာရေးက ၀က်သားမစားရလို့ တားမြစ်ထားပါတယ်”
“အင်း၊ ၀မ်းနည်းစရာပဲ၊ သိပ်အရသာရှိတာဗျ”
ဘူတာသို့ ရောက်သောအခါ ဂျူးဘာသာရေးတရားဟောဆရာက မဆင်းခင် ကက်သလစ်ဘုန်းကြီးကို
“ဖာသာရဲ့ ဇနီးကို ဦးညွတ်တယ်လို့ ပြောပေးပါ။”
“ကျနော့်မှာ ဇနီးမရှိဘူး၊ ကျနော်တို့ဘာသာရေးက ကျနော်တို့ကို မိန်းမ
“ဟုတ်လား ၊ ၀မ်းနည်းစရာပဲဗျာ၊ သိပ်အရသာရှိတာဗျ”
တစ်နေ့ ပန်းချီဆရာ တစ်ယောက် က ပန်းချီပြခန်းမှာ ထိုင်နေသော သူငယ်ချင်း ပန်းချီဆရာ တစ်ယောက် ကို
“သူငယ်ချင်း ပြပွဲ မှာ လူကြီးတွေက မင်းပန်းချီကားကို ဘာလို့
“ပန်းချီကားထဲမှာ မိခင်ရဲ့ ရင်ခွင်ထဲက နို့စို့နေတဲ့ ကလေးငယ်ရဲ့ရုပ်ဟာ
ရထားလက်မှတ်စစ်သည် တွဲပေါ်တက်လာပြီး လက်မှတ်များ လိုက်လံ စစ်ဆေးသည်။ လက်မှတ်မဲ့စီးသူများအတွက် ဒဏ်ငွေမှာ ၅၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်သည်။ အင်္ကျီလက်ပြတ် ၀တ်ထားသည့် ပထမအမျိုးသမီးငယ် တစ်ဦးအား ဒဏ်ငွေ ၃၀၀၀ ကျပ် ပေးဆောင်စေခဲ့သည်။
နောက်ကျောပြောင်နှင့် လည်ဟိုက်အင်္ကျီ လက်ပြတ်ဝတ်ထားသော ဒုတိယ အမျိုးသမီးကိုမူ ဒဏ်ငွေ ၂၀၀၀ ကျပ် ပေးစေခဲ့သည်။
နောက်ကျောပြောင်နှင့် လည်ဟိုက်အင်္ကျီ လက်ပြတ်၊ မီနီစကတ်တို ၀တ်ထားသော တတိယအမျိုးသမီးကိုမူ ဒဏ်ငွေ ၁၀၀၀ ကျပ် ဒဏ်တပ်ခဲ့သည်။
စတုတ္ထအမျိုးသမီးကိုမူ ပိုက်ဆံတစ်ပြားမှ မယူခဲ့ချေ။ အဘယ့်ကြောင့်ဟု သင်ထင်ပါသနည်း။
အိမ်မှာယောက်ျားမရှိတုန်း မိန်းမက တခြားယောက်ျားနဲ့ တိတ်တိတ်ပုန်းနေတယ်။ အဲဒီမှာ ရုတ်တရက် ယောက်ျားကားသံကြားတော့ မိန်းမက “နင့်အဝတ်အစားတွေ မြန်မြန်ယူပြီး ပြတင်းပေါက်ကနေ ပြေးတော့” လို့ ပြောတယ်။
မိန်းမက အင်္ကျီတွေအတင်းထိုးထည့်ပေးပြီး ပြေးခိုင်းတယ်။ အဲဒီလူလည်း ပြတင်းပေါက်က ခုန်ချလိုက်တာ မာရသွန်ပြေးနေတဲ့ လူအုပ်ကြားထဲရောက်သွားခဲ့တယ်။
“ဟုတ်ကဲ့… ပန်းဝင်တာနဲ့ ကျွန်တော်ပြန်ဝတ်လိုက်လို့ရပါတယ်”
“ခင်ဗျား ခါတိုင်းလည်း ကွန်ဒုံးတပ်ပြီး ပြေးတတ်တာလား”
လူအတော်အသင့်ရှိတဲ့ အရက်ဘားတစ်ခုထဲကို မိန်းကလေးတစ်ယောက် ၀င်လာတယ်။ ဘီယာတစ်ခွက်မှာပြီးတစ်ယောက်ထဲထိုင်သောက်နေတယ်။ ခဏနေတော့ ကောင်လေးတစ်ယောက်လာပြီး မိတ်ဆက်ပါလေရော
ဒါနဲ့ကောင်မလေးလဲ ကောင်လေးရဲ့ အမေးကို ချက်ချင်းဖြေပေးလိုက်တယ်
“ရှင် ကျမကို ဘယ်လို အတန်းအစားထဲက ထင်လို့လဲ… ဘာကိစ္စရှင်နဲ့ ဟိုတယ်လိုက်အိပ်ရမှာလဲ”
ဆိုပြီး တော်ရုံကျယ်တဲ့အသံနဲ့ အော်ပြောလိုက်လေရဲ့.. ဘားတစ်ခုလုံးရဲ့ အကြည့်တွေဟာ ရဲနေတဲ့မျက်နာနဲ့ ကောင်လေးဆီမှာပေါ့.. ဘာမှ မပြောသာတဲ့ကောင်လေးလဲ ကိုယ့်နေရာကိုယ်ပြန်ပြီး ထိုင်နေလေရဲ့.. ခဏလဲနေရော
ခုနှကကောင်မလေးဟာ ကောင်လေးဆီကို ပြန်လာပြီး ဒီလိုပြောပြတယ်..
“ဒီမယ်.. ရှင်စိတ်ဆိုးသွားလား.. တကယ်တော့ ကျမက စိတ်ပညာ နောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသူပါ.. ယျောင်္းလေးတွေရဲ့ ရှက်ကိုးရှက်ကန်းဖြစ်သွားတဲ့ စိတ်နဲ့ အမူအယာတွေကို လေ့လာချင်လို့ ဒီလိုလုပ်လိုက်တာပါ”
ဆိုတဲ့စကား ဆုံးဆုံးချင်းပဲ ကောင်လေးပြန်ပြောလိုက်ပုံက ….
“ဘာ!!!! ဒေါ်လာ ၅၀၀.. ဟုတ်လား?? နင်အဲလောက်ဈေးကြီးမှန်းငါဘာ့ကြောင့်မခန့်မှန်းမိတာပါ့လိမ့်” လို့အော်ပြီးပြောလိုက်လေရဲ့…
စိတ်ရောက်ဂါကုဆရာဝန်က သူ့ ရဲ့ လူနာကိုမေးတယ်………
“၁၀၀ ထဲကနေ ၁ နှုတ်ရင် ဘယ်လောက်ကျန်သလဲ”
“သုံည (၂) လုံးကျန်မယ်ဆရာ
ကိုချိုညီပေးပို့သော မေးလ်အား ပြန်လည်မျှဝေသည်
Posted by မိုးယံ at 12:17 AM Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
ဖတ်ပြီးပြီ (မKOM လေသံ)
ပြုံးပြုံးပြုံးနဲ့ရယ်သွားလေရဲ့...:)